ကိုရမ်ကျမ်းယင်းဘင်အတွက်မီးရှို့ပစ်ချ | Apg29
နော်ဝေအုပ်စုတစ်စုနော်ဝေအတွင်းအစ္စလာမ်ပပျောက်ရေး, ပူကျင့်ရှင်း, ရန်ကြိုးစားခဲ့ တစ်ကိုရမ်ကျမ်းကိုမီးရှို့ ခြင်း, စတုရန်းအစည်းအဝေးအတွက်သရုပ်ပြစဉ်ကာလအတွင်းနှစ်ဦးကိုဘင်ပစ်ချ၏။
အများအပြားကမွတ်စ်လင်ယောက်ျားပွဲချင်းပြီးခဲ့ကြသည်နှင့်အုပ်စုဆန့်ကျင်တိုက်ခိုက်နှင့်၎င်း၏ခေါင်းဆောင်အန်းနာ Tumyr သွားလေ၏။
လူတဦးကိုရမ်ကျမ်းမီးရှို့ဖျက်ဆီးသူကို Lars Thorsen တိုက်ခိုက်ခဲ့သည်။ တိုက်ခိုက်မှုအပေါ်သှားသောနှစ်ဦးစလုံးအသင်းအဖွဲ့ဝင်များနှင့်ပရိသတ်ဖမ်းဆီးခဲ့သည်။
စနေနေ့တွင်အဲဒီနောက် Peshawar နှင့်အခြားမြို့များတွင်နော်ဝေဆန့်ကျင်အစ္စလာမ္မစ်ပါတီ Jamaat-e-Islami သရုပ်ပြခဲ့သည်။ အဆိုပါဆန္ဒပြသူများသူတို့အားပို့ချ "Anti-အစ္စလာမ့်" စိတ်ဆိုးမွတ်စလင်များဖယ်ရှားပစ်ရမည်ကြောင်းပြုမူကြောင်းတောင်းဆိုခဲ့သည်။
တစ်ဦးအထူးပြုအဖြစ်ရှာရီယာဥပဒေနှင့်အပါကစ္စတန်ရှေ့နေတွေကွပ်မျက်ခံရခံရဖို့မီးလောကိုရမ်ကျမ်းကျင်းပသူအ Thorsen, တောင်းဆိုခဲ့သည်။ သို့သော်သူ့ကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့သောသူသည်, သူတို့ကဖြန့်ချိခံရဖို့ချင်တယ်။
ငါမကိုးကွယ်သည့်ဘာသာကိုကယ်တင်နိုင်သည်ကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောပါရန်ရှိသည်။ မအစ္စလာမ်မစ် ဘာသာရေးကို ။ ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းနှင့်နေထိုင်နေကယ်တင်နိုင်သူတစ်ဦးတည်းသာ လူတဦး သညျယရှေုခရစျ၏! သငျသညျကယျတငျခွငျးသို့ရောမည်ဖြစ်ပြီးအားလုံးသင့်ရဲ့အပြစ်ကိုလွတ်စေပြီသညျယရှေုကိုလက်ခံရရှိ!
V 08, söndag 28 februari 2021 kl 13:34